आर्ट ग्यालरीको भित्तामा टेपले टासिँएको सामान्य केराको मूल्य १ लाख २० हजार डलर ! - JanaSanchar.com
राष्ट्रिय समाचार(२०७७ कार्तिक ४, मंगलवार)जैमिनीको जैदिस्थित कालितिरदेखि हाँडीकोट शिरसम्मको पैदल यात्रा ! (फोटो फिचर सहित)
भिडियो समाचार(२०७७ आश्विन २१, बुधबार)“भमरालाई आश लाउनी”
स्थानीय(२०७७ आश्विन २१, बुधबार)बालक बेपत्ता प्रकरणः १७ घण्टामै पक्रिइन् महिला
आवाज(२०७७ आश्विन २०, मंगलवार)“हाम्रो जैमिनी” सस्थाको बागलुङ जैमिनीमा राहत बितरण सम्पन्न !
(२०७६ मंसिर २८, शनिबार)
डक्ट–टेपमार्फत भित्तामा टासिँएको एक केराको कलाकृति मूल्यको कारण चर्चामा छ ।
मियामीस्थित आर्ट बसलमा बुधबार उक्त कलाकृत्ति १ लाख २० हजार डलरमा बिक्री भयो । यो कलाकृत्तिलाई पेरिसको आर्ट ग्यालरी पेर्रोटिनले प्रदर्शनमा राखेको थियो ।
आर्ट ग्यालरीका अनुसार कलाकृत्तिको तीन संस्करण बनाइएको छ र त्यसमध्ये दुईको विक्रि भइसकेको छ ।
यसलाई इटालीका चर्चित कलाकार मौरिजियो क्याटेलनले बनाएका हुन् । कलाकृतिमा प्रयोग भएको केरालाई मियामीको एक किराना पसलबाट किनिएको थियो ।
केरालाई डक्ट–टेपको सहायताले भित्तामा टासिँएको छ । सामान्य केरा भएकाले कलाकृत्तिमा प्रयोग भएको केरा सड्ने जोखिम छ । तर यो आफैमा व्यङ्ग्यका त्यसो गरिएको यस कलाकृत्तिलाई प्रायोजन गने पेर्रोटिन ग्यालरीका प्रमुख इम्यानुअल पेर्रोटिनले बताए ।
संचारमाध्यमसँगको कुराकानीमा पेर्रोटिनले भने ,‘ केरा विश्वव्यापी व्यापार र व्यङ्ग्यको प्रतिक हो । उदेश्य अनुसार नै यसको नाम ‘कमेडियन’ दिइएको छ ।’
मौरिजियो क्याटेलन पछिल्लो समय १८ क्यारेट सुनको ट्वाइलेटबाट चर्चामा आएका थिए । ६० लाख डलर मुल्याकंन गरिएको उक्त कलाकृत्ति सेप्टेम्बरमा बेलायतस्थित ब्लेइनहेम दरबारबाट चोरिएको थियो ।
चोरीको अनुसन्धानका क्रममा पाँच व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । ट्वइलेट फिर्ता गरे पुरस्कारको घोषणा गरिएको भए पनि हालसम्म कोही पनि पक्राउ परेका छैनन् ।
पेर्रोटिनले टेपले टासिएको केराको पृष्ठभूमिबारे व्याख्या गरेको छ ।
‘क्याटेलनले पहिलेदेखि नै केराजस्तै आकारको कृति बनाउने सोचिरहेका थिए । भ्रमणमा उनी सधैं आफूसँग केरा बोकेर हिड्थे । उनी तिनलाई आफ्नो होटेलका कोठाहरुमा प्रेरणाको लागि झुण्डाउथे । त्यसपछि नै उनमा यस कलाकृतिको सोच आएको थियो ।’
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको (२०७६ मंसिर २८, शनिबार) 123 Viewed